H July 14, 2021
(ဖတျပီးရငျ ပွနျမြှဝေ စလေိုပါတယျ )
သငျ ခဈြတဲ့သူကို သစ်စာဖောကျ ခငျြနပွေီလား.. ဒီအခကျြတှကေို အရငျဆုံး ထညျ့တှေးလိုကျပါ…
သငျ့ ခဈြသူကို သငျထားသှားပွီးနောကျ...
၁) သငျနဲ့ စာပို့နကွေအခြိနျ သူသငျ့စာကို မြှျောနလေိမျ့မယျ ဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့... သငျ့စာကို မြှျောရငျး တခြိနျက သငျ သိပျခဈြခဲ့ရသူ အမှနျတကယျ ငိုကွှေးနေ ပါလိမျ့မယျ ။
၂) သငျနဲ့ ဖုနျးပွောနကွေ အခြိနျတှေ ရောကျရငျ သငျ့ ဖုနျးနံပါတျကို ချေါခှငျ့ မရတော့ပမေယျ သူအထပျထပျ ချေါနလေိမျ့မယျ ဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့... သငျ မကိုငျတော့တဲ့ ဖုနျးချေါသံကို နားထောငျရငျး သူ့နှလုံးတှေ တအား နာကငျြကွကှေဲ နပေါပွီ ။
၃) သငျနဲ့ သှားခဲ့လာခဲ့တဲ့ နရောတှေ ရောကျရငျ သငျမြား ရောကျနမေလား ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ သူ လိုကျရှာနတေယျ ဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့... သငျရောကျမလာတဲ့ အရငျ တခြိနျက အတူ ကွညျနူးခဲ့ကွတဲ့ နရောလေးမှာ သူတဈယောကျထဲ ငေးငိုငျပွီး မကျြရညျကနြမှော အမှနျတကယျပါ ။
၄) သငျနဲ့ပတျသကျလို့ နထေူ့းနမွေ့တျလေးတှေ ရောကျရငျ ( ဥပမာ - သငျ့ မှေးနလေို့မြိုး ) သူ မမမေ့လြော့ တဈခုခု လုပျပေးနမေယျ ဆိုတာ သိထားပါ... သူ့အနားမှာ သငျ မရှိတော့ပမေယျ့ သငျဟာ သူ့နှလုံးသားထဲမှာ အမွဲ ရှိနခေဲ့တယျလေ... သငျနဲ့ပတျသကျလို့ မပွောငျးလဲတဲ့ ခဈြခွငျး မတ်ေတာတှနေဲ့ အမှတျတရနတှေ့ရေောကျတိုငျး သူတဈယောကျထဲ သှေးပကျြမတတျ ကြိတျပီး ခံစားနရေတယျ ဆိုတာ သိထားပေးလိုကျပါ ။
၅) သငျနဲ့ အတူတူ အမှတျတရ ပစ်စညျးလေးကို မဖြောကျပဈပဲ သိမျးထားပွီး သငျ့ကို သတိရတိုငျး အမှတျတရ ပစ်စညျးလေးတှကေို ကွညျ့ပီး သငျ့ကိုယျစား စကားတှေ ပွောနတေတျတယျ ဆိုတာ သိထားပါ... သူနဲ့ပတျသကျလို့ သငျက အစားထိုးစရာ ရှိနပေမေယျ့ သငျ့နရောမှာ ဘယျသူ့မှ အစားမထိုးဘူး ဆိုတဲ့ မောပနျးစှာ သူ ရှငျသနျနရေရှာတယျ ဆိုတာ တကယျပါ ။
သငျ့အပျေါ သိပျခဈြခဲ့သူကို သငျ့ဖကျက သစ်စာဖောကျဖို့ ကွိုးစားနပွေီလား …?
သငျ့စိတျနဲ့ သငျ့သမိုငျး ကွိုကျသလို လုပျခှငျ့ ရှိတယျ... ဘယျသူမှလညျး တားခှငျ့ မရှိဘူးလေ...
ဒါပမေယျ့... လုပျခငျြတာ လုပျပွီးရငျ နောကျဆကျတှဲ အဆိုးအကောငျးကို သငျကိုယျတိုငျပဲ ပွနျရိတျသိမျးရမယျ ဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့ ။
သူတပါးကို အသဲခှဲဖူးရငျ သငျလညျး အသဲပွနျခှဲခံရမှာ ဧကံမလှဲဘူးလေ... သူတပါးကို မကျြရညျကအြောငျ လုပျထားဖူးရငျ သငျ့မကျြရညျကိုလညျး အဆတဈရာမက ပွနျပေးဆပျဖို့ တှေးထားပါ ။
လောကကွီးရဲ့ သဘာဝကိုက ဘယျအရာမှ အလကား မရဘူး... တဈခု ယူထားဖူးရငျ တဈခုပွနျ ပေးဆပျရတာ ရှငျးနတောပဲ ။ ကိုယျ့အလှညျ့ကရြငျ ခံနိုငျရညျ ရှိမရှိကိုသာ သစ်စာမဖောကျခငျက ကွိုတှေးထားပါ ။
သငျ့အပျေါ အနဈနာခံပွီး သစ်စာရှိရှိ ခဈြပေးသူ " သငျဆိုးသမြှ အပွုံးမပကျြ ခဈြနိုငျသူ " သငျ့ရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပွီး ဖေးဖေးမမရှိတဲ့ ခဈြသူအပျေါ ဘာအပွဈမှ မရှိပဲ သစ်စာဖောကျတော့မယျ လို့တှေးမိလိုကျခြိနျတိုငျး...
" သငျ့ထကျသာတဲ့ လူတှကေိုလညျး သငျ့ခဈြသူအနား နတျကောငျး နတျမွတျတှကေ ပို့ပေးနပွေီ ဆိုတာ
သတိခပျြလိုကျပါ " ဝဋျဆိုတာ နောငျဘဝထိ စောငျ့နစေရာ မလိုဘူးလေ ။
အပွဈ မရှိတဲ့ ခဈြသူကို သစ်စာဖောကျခငျြလို့ ကိုယျ့အပျေါ စိတျကုနျသှားအောငျ ဥပက်ေခာပညာတှေ ထုတျသုံးနပွေီလား …? မကျြရညျကအြောငျ နညျးမြိုးစုံနဲ့ စိတျဒုက်ခ ပေးမိနပွေီလား …?
" သငျမမပေ့ါနဲ့" လူတဈယောကျကို ဒေါသအလြောကျ ဓါးနဲ့ ခုတျလိုကျတဲ့ ဝဋျကွှေးဆိုတာ နောကျဘဝမှ ဆပျရမှာနျော.. လူတဈယောကျရဲ့ စိတျနှလုံးကို နာကငျြစတေဲ့ ဝဋျကွှေးဆိုတာ နမေ့ကူးဘူး ။
ဒီစာလေးကို ဖတျမိခြိနျ တိုကျဆိုငျမှုရှိရငျ သငျ့ခဈြသူအပျေါ သစ်စာဖောကျမဲ့ အတှေးတှကေို ဒီနရောတငျ ရပျတနျ့ပွီး သငျ့ခဈြသူကို အရငျအတိုငျး ပွနျခဈြကွညျ့လိုကျ.. သငျပေးတဲ့ မတ်ေတာတှထေကျ အဆတဈရာမကတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှေ သငျ့ခဈြသူစီက ပွနျရလာပါလိမျ့မယျ ။
သငျကိုယျတိုငျလညျး လူတှကွေားထဲမှာ လူမှုကငျြ့ဝတျ " လူ့စညျးကမျး " စာနာစိတျ အစရှိသဖွငျ့ စာရိတ်တကို အခွခေံထားတဲ့ " သစ်စာဖောကျလောကျကောငျ " မဖွဈတော့ဘူးပေါ့ ။
" ပေးဆပျမှုတိုငျးဟာ အရငျး ရှိသလို အကြိုးလညျး မယုတျစပေါဘူး " " လောကကွီးထဲမှာ ယောကျြား မိနျးမ ပေါတယျ... ကိုယျ့ဘဝ အမှနျကို လကျခံနိုငျတဲ့ အေးအတူပူအမြှ သစ်စာရှိရှိ ခဈြနိုငျသူသာ ရှားပါးတာ ။
(ဖတ်ပီးရင် ပြန်မျှဝေ စေလိုပါတယ် )
သင် ချစ်တဲ့သူကို သစ္စာဖောက် ချင်နေပြီလား... ဒီအချက်တွေကို အရင်ဆုံး ထည့်တွေးလိုက်ပါ…
သင့် ချစ်သူကို သင်ထားသွားပြီးနောက်...
၁) သင်နဲ့စာပို့ နေကြအချိန် သူသင့်စာကို မျှော်နေလိမ့်မယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ... သင့်စာကို မျှော်ရင်း တချိန်က သင် သိပ်ချစ်ခဲ့ရသူ အမှန်တကယ် င်ိုကြွေးနေ ပါလိမ့်မယ် ။
၂) သင်နဲ့ဖုန်းပြောနေကြ အချိန်တွေ ရောက်ရင် သင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ခေါ်ခွင့် မရတော့ပေမယ် သူအထပ်ထပ် ခေါ်နေလိမ့်မယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ... သင် မကိုင်တော့တဲ့ ဖုန်းခေါ်သံကို နားထောင်ရင်း သူ့ နှလုံးတွေ တအား နာကျင်ကြေကွဲ နေပါပြီ ။
၃) သင်နဲ့သွားခဲ့လာခဲ့တဲ့ နေရာတွေ ရောက်ရင် သင်များ ရောက်နေမလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူ လိုက်ရှာနေတယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ... သင်ရောက်မလာတဲ့ အရင် တချိန်က အတူ ကြည်နူးခဲ့ကြတဲ့ နေရာလေးမှာ သူတစ်ယောက်ထဲ ငေးငိုင်ပြီး မျက်ရည်ကျနေမှာ အမှန်တကယ်ပါ ။
၄) သင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နေ့ ထူးနေ့ မြတ်လေးတွေ ရောက်ရင် ( ဥပမာ - သင့် မွေးနေ့ လိုမျိုး ) သူ မမေ့မလျော့ တစ်ခုခု လုပ်ပေးနေမယ် ဆိုတာ သိထားပါ... သူ့ အနားမှာ သင် မရှိတော့ပေမယ့် သင်ဟာ သူ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲ ရှိနေခဲ့တယ်လေ... သင်နဲ့ ပတ်သက်လို့မပြောင်းလဲတဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေနဲ့အမှတ်တရနေ့ တွေရောက်တိုင်း သူတစ်ယောက်ထဲ သွေးပျက်မတတ် ကျိတ်ပီး ခံစားနေရတယ် ဆိုတာ သိထားပေးလိုက်ပါ ။
၅) သင်နဲ့ အတူတူ အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးကို မဖျောက်ပစ်ပဲ သိမ်းထားပြီး သင့်ကို သတိရတိုင်း အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေကို ကြည့်ပီး သင့်ကိုယ်စား စကားတွေ ပြောနေတတ်တယ် ဆိုတာ သိထားပါ... သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင်က အစားထိုးစရာ ရှိနေပေမယ့် သင့်နေရာမှာ ဘယ်သူ့ မှ အစားမထိုးဘူး ဆိုတဲ့ မောပန်းစွာ သူ ရှင်သန်နေရရှာတယ် ဆိုတာ တကယ်ပါ ။
သင့်အပေါ် သိပ်ချစ်ခဲ့သူကို သင့်ဖက်က သစ္စာဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီလား …?
သင့်စိတ်နဲ့သင့်သမိုင်း ကြိုက်သလို လုပ်ခွင့် ရှိတယ်... ဘယ်သူမှလည်း တားခွင့် မရှိဘူးလေ...
ဒါပေမယ့်... လုပ်ချင်တာ လုပ်ပြီးရင် နောက်ဆက်တွဲ အဆိုးအကောင်းကို သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ် ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
သူတပါးကို အသဲခွဲဖူးရင် သင်လည်း အသဲပြန်ခွဲခံရမှာ ဧကံမလွဲဘူးလေ... သူတပါးကို မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်ထားဖူးရင် သင့်မျက်ရည်ကိုလည်း အဆတစ်ရာမက ပြန်ပေးဆပ်ဖို့တွေးထားပါ ။
လောကကြီးရဲ့ သဘာဝကိုက ဘယ်အရာမှ အလကား မရဘူး... တစ်ခု ယူထားဖူးရင် တစ်ခုပြန် ပေးဆပ်ရတာ ရှင်းနေတာပဲ ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် ခံနိုင်ရည် ရှိမရှိကိုသာ သစ္စာမဖောက်ခင်က ကြိုတွေးထားပါ ။
သင့်အပေါ် အနစ်နာခံပြီး သစ္စာရှိရှိ ချစ်ပေးသူ " သင်ဆိုးသမျှ အပြုံးမပျက် ချစ်နိုင်သူ " သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပြီး ဖေးဖေးမမရှိတဲ့ ချစ်သူအပေါ် ဘာအပြစ်မှ မရှိပဲ သစ္စာဖောက်တော့မယ် လို့ တွေးမိလိုက်ချိန်တိုင်း...
" သင့်ထက်သာတဲ့ လူတွေကိုလည်း သင့်ချစ်သူအနား နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေက ပို့ ပေးနေပြီ ဆိုတာ
သတိချပ်လိုက်ပါ " ဝဋ်ဆိုတာ နောင်ဘဝထိ စောင့်နေစရာ မလိုဘူးလေ ။
အပြစ် မရှိတဲ့ ချစ်သူကို သစ္စာဖောက်ချင်လို့ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ကုန်သွားအောင် ဥပေက္ခာပညာတွေ ထုတ်သုံးနေပြီလား …? မျက်ရည်ကျအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့စိတ်ဒုက္ခ ပေးမိနေပြီလား …?
" သင်မမေ့ပါနဲ့ " လူတစ်ယောက်ကို ဒေါသအလျောက် ဓါးနဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့ ဝဋ်ကြွေးဆိုတာ နောက်ဘဝမှ ဆပ်ရမှာနော်.. လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို နာကျင်စေတဲ့ ဝဋ်ကြွေးဆိုတာ နေ့့မကူးဘူး ။
ဒီစာလေးကို ဖတ်မိချိန် တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် သင့်ချစ်သူအပေါ် သစ္စာဖောက်မဲ့ အတွေးတွေကို ဒီနေရာတင် ရပ်တန့် ပြီး သင့်ချစ်သူကို အရင်အတိုင်း ပြန်ချစ်ကြည့်လိုက်.. သင်ပေးတဲ့ မေတ္တာတွေထက် အဆတစ်ရာမကတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ သင့်ချစ်သူစီက ပြန်ရလာပါလိမ့်မယ် ။
သင်ကိုယ်တိုင်လည်း လူတွေကြားထဲမှာ လူမှုကျင့်ဝတ် " လူ့ စည်းကမ်း " စာနာစိတ် အစရှိသဖြင့် စာရိတ္တကို အခြေခံထားတဲ့ " သစ္စာဖောက်လောက်ကောင် " မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ ။
" ပေးဆပ်မှုတိုင်းဟာ အရင်း ရှိသလို အကျိုးလည်း မယုတ်စေပါဘူး " " လောကကြီးထဲမှာ ယောက်ျား မိန်းမ ပေါတယ်... ကိုယ့်ဘဝ အမှန်ကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အေးအတူပူအမျှ သစ္စာရှိရှိ ချစ်နိုင်သူသာ ရှားပါးတာ ။